မန်း နဲ့ မြန်မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Copy/Paste » မန်း နဲ့ မြန်မာ	11
မန်း နဲ့ မြန်မာ
Posted by Kyi Lwin on Jan 22, 2016 in Copy/Paste | 11 comments
ကိုယ့်မတော့ တချိန်လုံး မန်းဂေဇက်ချည်းရေးနေရင်းက ခုမှပြန်ကြည့်မိတော့ မြန်မာဖြစ်နေတာတွေ့မိ။
မှားမိတာ ၀န္တာမိ ပါ ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သူကြီးတို့ရွာ မန်း ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဖြစ်ဖြစ် ချစ်ပြီးသားပါပဲ။
ဒီရွာရှိလို့သာ ဒီစာတွေ ရေးနိုင်တာ၊ ရေးချင်တာတွေ ရေးနိုင်တာမို့ ရေးကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်။
ကနေ့က စ လို့ နောင် မြန်ဂေဇက်လို့ ပြောင်းရေးပါတောမည်ဖြစ်ကြောင်း။
မြန်ဂေဇက်ရွာ သူကြီးနဲ့တကွ ရွာသူ ရွာသားအပေါင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ ချမ်းမြေ့ကြစေရာ။
Kyi Lwin has written 56 post in this Website..
View all posts by Kyi Lwin →	Blog
Tawwin Pan says: ပြောမှပဲကြည့်မိတော့တယ်။ သတိတောင်မထားမိပါဘူး။ စာတွေပဲဝင်ဝင်ကြည့်နေတော့။
ခင်ဇော် says: နာမည် က ပြစ်ညပ် တွေပါကွီ။
(ခွက်ဒစ် အမ ဝင့်)
alinsett says: မဝင့်ရဲ့ သီဝရီအရဆိုရင်…. လက်ရှိ အချိန်ထိ… ရှိနေသေးတာတွေက..ဂွစာတွေတဲ့..
ရွာထဲမှာ ဂွစာ မဟုတ်ပဲ… အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ပိုတူတာဆိုလို့…
ကျနော်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ ပလို့ဂျိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြောင်းလဲချိန်တန်သွားတဲ့အခါ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် . . ဟိဟိ . . . မပြောင်းတာကတော့ နှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာ ရယ် စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: မပြောင်းတဲ့အပြင်..နယ်ချဲ့ပြီး.. ဖဘလောကထဲဝင်နေလေရဲ့…
အဲဒါကိုက.. ပြောင်းမယ့်နိမိတ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 132
Kyi Lwin says: Kai ရေ ဖဘ ထဲ ၀င်ကြည့်ပေမယ့် ဘာမှမတွေ့လို့ မှတ်ချက်တောင်ရေးခဲ့ပါသကော။ ဖဘမှာရော အဖွဲ့ဝင်စာရင်းသွင်းရအုံးမှာလား။
Swal Taw Ywet says: ဒို့ ကတော့
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဒို့ကတော့ မြန်မာပဲကြိုက်တယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အချိန်တွေက အလိုလိုသွား
kai says: မန်းက မြို့လေ..။
နောက်ဆို… စင်္ကြ၀ဌာတက်မလားလို့…။ ပုံ။ စင်္ကြာဝဌာဂဇက်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: ဒီလို ​လေ​တွေ တိုက်​လွန်းလို့လည်း